October 8, 2019 - CeleLove
အနေအေးတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးတွေဆိုပြီး သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မင်းသား (၅) ယောက်
October 8, 2019 Cele Love 0
အနေအေးတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးတွေဆိုပြီး သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မင်းသား (၅) ယောက် မြန်မာမင်းသားတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ အနေအေးတဲ့ ဦးရေခဲတုံးကြီးတွေဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ သတ်မှတ်တာ ခံထားရတဲ့ မင်းသားတွေ ရှိပါတယ်။ ပင်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုက အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြသလို စကားပြောဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေပဲ ပြောဆိုတတ်တာတွေကြောင့် တည်ငြိမ်ပြီးအေးတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေကြတာပါ ။ […]
October လမွေးဖွားသူတွေရဲ့ သူမတူ ခြားနားတဲ့ ထူးခြားချက်များ
October လမွေးဖွားသူတွေရဲ့ သူမတူ ခြားနားတဲ့ ထူးခြားချက်များ ဘာလိုလိုနဲ့ အောက်တိုဘာလတောင် ရောက်လာပြီနော်။ ဆောင်းရာသီရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ကြိုဆိုတာလည်း အောက်တိုဘာလပါပဲ။ အောက်တိုဘာလမှာ မွေးဖွားသူတွေက ထူးခြားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ အကျင့်တွေ နဲ့ထူးခြားချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …… (၁) ဒီလမွေးဖွားသူတွေက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ကြတယ် သူတို့ရဲ့ […]
သိန်း(၇၀)ကနေ သိန်း (၁၀၀) အတွင်းပေးမယ် ဆိုပြီး ပျော်တော်ဆက်ဖို့ လားငှားတဲ့ သူကို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုလိုက်တဲ့ မြညိုလေး
သိန်း(၇၀)ကနေ သိန်း (၁၀၀) အတွင်းပေးမယ် ဆိုပြီး ပျော်တော်ဆက်ဖို့ လားငှားတဲ့ သူကို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုလိုက်တဲ့ မြညိုလေး မြညိုလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မြတ်သူသူဇင် ကတော့ တစ်ဟုန်ထိုး အောင်မြင်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသမီးလေး တစ်ဦးပါနော်။” ပျားရည်အိုင် ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ […]
ညအိပ်နေတုန်း ခြေထောက်ကြွက်တက်တာကို ချက်ချင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု
ညအိပ်နေတုန်း ခြေထောက်ကြွက်တက်တာကို ချက်ချင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု ညဘက်အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ ခြေထောက်ကြွက်တက်တာဟာ ခံရခက်ပြီး အန္တရာယ်လည်းများတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သလို ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့လည်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက လုပ်ရလွယ်ကူပြီး အမှန်တကယ် ထိရောက်အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် …. (၁) ခြေဖဝါးကိုနှိပ်ပေးပါ ” […]
ခွေးလေးရဲ့ ဆေးကုသစရိတ် ဈေးကြီးလွန်းလို့ဆိုပြီး ခွေးကိုဆေးခန်းမှာတင် ရိုက်သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ခွေးပိုင်ရှင်(ရုပ်/သံ)
ခွေးလေးရဲ့ ဆေးကုသစရိတ် ဈေးကြီးလွန်းလို့ဆိုပြီး ခွေးကိုဆေးခန်းမှာတင် ရိုက်သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ခွေးပိုင်ရှင်(ရုပ်/သံ) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာဟာ အမှန်တကယ်တော့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရသလိုပါပဲ ။ သူတို့လေးတွေ ကျန်းမာပြီးသန်စွမ်းအောင် အစားအစာတွေ ၊ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဂရုစိုက်ရမှာက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့တာဝန်ပါ ။ သေချာသလောက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ဆေးကုသစရိတ်တွေကြောင့် ပိုင်ရှင်တွေကတစ်ခါတစ်လေတော့ ညည်းညူ မိကြမှာပါပဲ …။ […]
ရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှ ဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရား
ရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှ ဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရား နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ရောင်းချရန်အတွက် ပင့်ဆောင်ထားသော မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်အား အိပ်မက်အရ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်မည်ဟု ဆိုသောကြောင့် ပြန်လည်ပင့်ဆောင်လာရာ … ကျောက်မဲမြို့နယ် နောင်ပိန်လမ်းခွဲတွင် ခေတ္တနားခိုရာမှမည်သို့မျှအခြားနေရာသို့ပင့်ဆောင်မရတော့ပဲ ယာယီကိန်းဝပ် စံပါယ်လျက် ရှိသောကြောင့် သွားရောက် ဖူးမျော်သူများဖြင့် […]
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားရင် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူများ
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားရင် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူများ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်စိတ်ကို နားမလည်သေးတဲ့ ပုရိသတွေအတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် ဘယ်လိုခံစားရမလည်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. – တူတူလမ်းလျှောက်နေရင်း ကောင်လေးဘက်ကို အတင်းတိုးကပ်လာတဲ့အခါ သူမရဲ့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်စေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ် …။ – ချစ်သူဆီက ပွေ့ဖက်မှုကို […]
” သင်ထိုင်လေ့ရှိတဲ့ ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်း “
” သင်ထိုင်လေ့ရှိတဲ့ ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်း “ လူသားတွေ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြုမူကြတယ်ဆိုတာ ပြောပုံဆိုပုံတွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အမူအရာကလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အမူအရာဆိုတဲ့အထဲမှာ မျက်နှာထားနဲ့ ခြေဟန်လက်ဟန်တွေသာမက ထိုင်တဲ့ ပုံစံကပါ ထိုသူအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီပုံစံ (၅)မျိုးထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်တာ […]
ဖြိုးပြည့် စုံအဖမ်းခံရခြင်း နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တေးရေးမင်းချစ်သူ
ဖြိုးပြည့် စုံအဖမ်းခံရခြင်း နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ တေးရေးမင်းချစ်သူ ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ ယမန်နေ့က မူးယစ်ဆေးဝါးမှုကြောင့် ဖြိုးပြည့်စုံ ထိန်းသိမ်းခံ ရတယ် ဆိုတဲ့သတင်းက ပရိသတ်တွေကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေခဲ့ တာပါ …။ ဖြိုးပြည့်စုံ တစ်ယောက် ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုအဖမ်းခံရတာလည်း….ဖြိုးပြည့်စုံ တစ်ယောက် ဘယ်လိုလူမျိုးလည်း […]
ဒီအထုပ်လေးတွေ တွေ့ရင် လုံးဝ လွင့်မပြစ်ကြနဲ့နော်…..
ဒီအထုပ်လေးတွေ တွေ့ရင် လုံးဝ လွင့်မပြစ်ကြနဲ့နော်….. “ Silica Gel Bags တွေကိုဘာလို့ လွှင့်မပစ်သင့်တာလဲ ? ” မုန့်ဘူးတွေ ကင်မရာဘူးတွေ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေ ပါတဲ့ အိတ်လေးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ […]